Iyo Lambda Musiyano: Vaccine Resistant uye inotapukira?
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Health News » Iyo Lambda Musiyano: Vaccine Resistant uye inotapukira?
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Chile Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • Health News • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Iyo Lambda Variant yeCOVID-19 inogona kunge iri nhanho kumusoro kubva kune yazvino Delta Variant, inofungidzirwa yekukonzera shanduko mukutapurika kana kukonzera chirwere chakanyanya.
Zvisinei ichiri kuongororwa. Zvidzidzo zveLab zvinoratidza kuti zvine shanduko dzinopesana nemasoja ekudzivirira hutachiona.
Musiyano weLambda wakwezva kutariswa senge inogona kutyisidzira nyowani mukukudziridzwa kwedenda reCOPVID-19
Musiyano weLambda wecoronavirus, wakatanga kuzivikanwa muPeru muna Zvita, unogona kunge uchidzikira, asi zvakare une mukana wekukonzera chirwere chakakomba kana chisina kumira. Mhosva dzaive dzawanikwa muTexas neSouth Carolina, uye muna 81% yematambudziko akawanikwa muPeru.
Iyo Lambda musiyano ine shanduko dzinopesana nemushonga.
Shanduko mbiri mumusiyano weLambda - T76I uye L452Q - zvinoita kuti itapurire zvakanyanya kupfuura iyo COVID musiyano wakatsvaira pasirese muna 2020
Mhedziso yeongororo iyi yakaenderana nezvakawanikwa nechikwata muChile chakawana musiyano unogona kunzvenga masoja ekudzivirira chirwere, Chile Infection Control yakashuma.
Chirevo ichi hachisati chaongororwa nevezera.
Mhando ye COVID-19 inoratidza kuti inopesana nemishonga yekudzivirira inochengetedza nyanzvi dzezvekurapa, vashandi vehutano hweveruzhinji, uye vashandi vezvehutano pazvikamu zvemberi zvehosha yeCOVID-19 kumusoro husiku.
Ndeupi musiyano weLambda zvinoenderana nechidzidzo kubva kuChile?
kumashure Iyo ichangobva kutsanangurwa SARS-CoV-2 mutsara wedzinza C.37 wakangobva kusarudzwa semusiyano wezvekufarira neWHO (Lambda musiyano) zvichibva pamatanho akakwira ekupararira munyika dzeSouth America uye kuvapo kwekuchinja kwakakomba muprike protein. Iko kukanganisa kweshanduko dzakadai mukutapukirwa uye kupukunyuka kwezvirwere mumuviri kutsausa hutachiona hazvizivikanwe zvachose.
nzira Isu takaita pseudotyped virus neutralization assay uye takatarisana nemhedzisiro yeiyo Lambda musiyano pakutapukirwa uye kupukunyuka kwezvirwere tichishandisa masampula eplasma kubva kuvashandi vezvehutano (HCW) kubva kunzvimbo mbiri muSantiago, Chile iyo yakagamuchira chirongwa chemadosi maviri eiyo isina kugadziriswa hutachiona hutachiona CoronaVac.
Isu takaona kuwedzera hutachiona hwakapindirana neLambda spike protein yaive yakatokwira kupfuura iyo yeD614G (mutsara B) kana iyo Alpha neGamma misiyano. Kuenzaniswa nemhando yemusango (mutsara A), kutapudza kwakadzikira ne3.05-kupetwa kweiyo Lambda musiyano nepo yaive 2.33-fold yeiyo Gamma musiyano uye 2.03-fold yeiyo Alpha musiyano.
mhedziso Mhedzisiro yedu inoratidza kuti shanduko dziripo muprike protein yeiyo Lambda musiyano wekufarira unopa kuwedzera hutachiona uye immune kupukunyuka kubva kunorerutsa maantibhakosi akakwenenzverwa naCoronaVac. Idzi data dzinosimbisa iyo pfungwa yekuti makuru ekudzivirira macampaign munyika dzine yakakwira SARS-CoV-2 kutenderera kunofanirwa kuperekedzwa neyakaomarara genomic kuongororwa ichibvumidza kuzivikanwa kwenzvimbo nyowani dzinotakura spike mutations uye immunology zvidzidzo zvakanangana nekuona kukanganisa kweiyi shanduko mukuzvidzivirira kwekuzvidzivirira uye majekiseni kubudirira.
Kubuda kweSARS-CoV-2 misiyano yekunetsekana uye misiyano yekufarira kwave kuri chiratidzo chehosha ye COVID-19 muna 2021.
Iyo ichangobva kupihwa SARS-CoV-2 dzinza C.37 rakasarudzwa munguva pfupi yapfuura senge musiyano wekufarira neWHO muna Chikumi 14.th uye yakafananidzwa seiyo Lambda musiyano. Kuvapo kweiyi misiyano mitsva kwakataurwa mune dzinopfuura nyika makumi maviri saJune 20 nezvizhinji zvezvikamu zviripo zvichibva kunyika dzekuSouth America, kunyanya kubva kuChile, Peru, Ecuador neArgentina.5. Iyi misiyano mitsva yekufarira inoratidzirwa nekuvapo kwekubviswa kwekuchinja muORF1a geni (-3675-3677) yatove yakatsanangurwa muBeta uye Gamma zvakasiyana zvekushushikana uye shanduko Δ246-252, G75V, T76I, L452Q, F490S, T859N mu spike mapuroteni6. Iko kukanganisa kweiyi spike shanduko mukutapukirwa uye kupukunyuka kune neutralizing antibodies hazvizivikanwe zvachose.
Chile parizvino iri kuita chirongwa chakakura chekudzivirira. Zvinoenderana neruzhinji data kubva kuChilean Ministry yehutano kubva muna Chikumi 27th 2021, 65.6% yevaitarisirwa vanhu (vane makore gumi nemasere zvichikwira) vakagamuchira chirongwa chakakwana chekudzivirira7. Vazhinji (78.2%) vevanhu vakabaiwa hutachiwana vakagashira mushonga wehutachiona husina kuvharwa CoronaVac, iyo yakambotaurwa kuti inokonzeresa masoja ekudzivirira asi pamazita epasi achienzaniswa neplasma kana sera kubva kuvanhu vanopora.
Pano, isu takashandisa yedu yambotsanangurwa pseudotyped hutachiona kutapudza kuyedza12 kuona kukanganiswa kweLambda musiyano pamhinduro dzinodzivirira masoja ekudzivirira hutachiona akakwenenzverwa nemushonga wehutachiona husingaenzanisirwe CoronaVac. Yedu data inoratidza kuti shanduko dziripo muprike protein yeiyo Lambda musiyano confer yakawedzera hutachiona uye kupukunyuka kunodzora ma antibodies akakwenenzverwa neinactivated hutachiona jekiseni CoronaVac.
Vashandi vehutano vanobva kunzvimbo mbiri muSantiago, Chile vakakokwa kuti vatore chikamu. Vazvipiri vakagamuchira chirongwa chemadosi maviri eCoronaVac, mumwe mubairo uchipihwa mazuva makumi maviri nemasere zvakaparadzana zvichienderana nechirongwa chekudzivirira chekuChile. Masampula ePlasma akaunganidzwa pakati paMay naJune 28. Vese vatori vechikamu vakasayina mvumo yekuziva isati yaitwa nzira yekudzidza.